ဘာတွေမှားနေခဲ့လဲ၊ ဘာတွေပြုပြင်ရတော့မှာလဲ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်? | FOX Sports Myanmar
လာလီဂါ | ဇနျနဝါရီ 12, 2019
ဘာတွေမှားနေခဲ့လဲ၊ ဘာတွေပြုပြင်ရတော့မှာလဲ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်?
‘I need to see Marcelo shirtless’ – Mendy
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ခြေစွမ်းကတော့ တစ်နေ့ရွှေ၊ တစ်နေ့ငွေဖြစ်နေပြီး ပူလိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့ နှဲသမားပါးစပ်ရယ်လို့ကို ပြောစမှတ်တွင်နေပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ခြေစွမ်းကောင်းသလောက် နောက်ပွဲကျရင် ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင် ခြေစွမ်းက ကျဆင်းသွားနေတာက ဒီရာသီမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးရတော့မယ့် အနေအထားနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီး ကံဆိုးခဲ့ရင် ဥရောပဘုရင်ကြီးအတွက် ဆုဖလားလက်မဲ့ရာသီကိုတောင် ရင်ဆိုင်သွားရနိုင်ပါတယ်။ ဇီဒန်းထွက်တယ်၊ ရော်နယ်ဒို ထွက်တယ်၊ လော့ပ်တယ်ဂီဝင်လာပြီး ပြန်ထွက်သွားကာ ဆိုလာရီ ပြန်ဝင်လာခဲ့တဲ့အထိကို ရီးရဲလ်က မတည်မငြိမ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီအခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ ရီးရဲလ်လုပ်စရာတွေက အများကြီးပါ။
ပထမဆုံးကတော့ အသင်းမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပီရက်ဇ်ရဲ့ ဥက္ကဌရာထူးနေရာကို အစားထိုးသွားဖို့ပါ။ ပီရက်ဇ်ရဲ့ ခေတ်က ကုန်သွားပါပြီ၊ ငွေကြေးအများအပြားသုံးပြီး ဂလက်တီကိုကြယ်စင်စုစီမံကိန်းကို တည်ဆောက်ခဲ့တာကလည်း ဒိတ်အောက်သွားပါပြီ။
နည်းပြတွေကို ခန့်တယ်၊ ငွေပေးပြီး ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမှာ ပီရက်ဇ်က အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး မဟာပြိုင်ဘက် ဘာစီလိုနာ တည်ငြိမ်သလောက် ရီးရဲလ်မှာ သူ့ရဲ့ ခလောက်ဆန်မှုတွေက တော်တော်လေးကို အသင်းတွင်း လှုပ်ခတ်နေစေခဲ့တာပါ။ အရည်အချင်းရှိပြီး အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဖျံကျလွန်းတယ်လို့ ချီးကျူးရမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပီရက်ဇ်က သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရီးရဲလ်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တည်ဆောက်ထားတာက အသင်းအတွက် ရေရှည်မှာ ဆိုးကျိုးတွေများလာစေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဒီနှစ်မှာ သက်သေပြနေပါပြီ။ ဒီအတွက် ပီရက်ဇ်ရဲ့ နေရာကို ရီးရဲလ်တို့ အစားထိုးရတော့မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့နေရာအတွက်ပါ။ အသင်းအတွက် ဂိုးပေါင်းများစွာ သွင်းယူပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားကို ရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် ရီးရဲလ်မှာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကို မီတဲ့ကစားသမား တစ်ယောက်မှ ရှိမနေတော့ပါဘူး။ တစ်ရာသီကို အနည်းဆုံး
သွင်းဂိုး (၃၀)လောက် သွင်းနိုင်တဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ် (၅)ခုက တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးလောက်ကို ၀ယ်ယူဖို့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ မာရီယာနို နဲ့ မန်စီးတီး ဒီယက်ဇ်တို့လို လူငယ်တွေကိုသာ ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားပြီး အတွေ့အကြုံရင့် တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်ကို အခုထိ သူတို့ မဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးတာက အားနည်းချက်တစ်ခုပါ။ ဘန်ဇီမာက ယုံစားလို့ရတဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကို သိသိနဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဆင်နေတဲ့ ရီးရဲလ်အဖြစ်က ပိုပိုပြီး ဆိုးလာဖို့သာ ရှိနေပါတယ်။
ဇီဒန်းလက်ထက်မှာ ၄-၁-၂-၃ ကစားကွက်ကို ပင်တိုင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ ကက်စ်မဲရိုးကို ကွင်းလယ်ခံစစ်မှာ ထားကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားကွက်ကနေပဲ ဇီဒန်းအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ လော့ပ်တယ်ဂီလက်ထက်မှာ ၄-၃-၃ ပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ အသင်းကို Possession Game ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်းလက်ထက်မှာ မာကျောခဲ့တဲ့ ခံစစ်လိုင်းကို သူက ဖျက်စီးပစ်ခဲ့လို့ ရီးရဲလ် ပြသနာတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုလာရီကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သူက ၄-၃-၃ နဲ့ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်ကို အားသန်သူပါ။ ဒီရာသီမှာ အသင်းကစားကွက်ကို
မကြာခဏဆိုသလို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီး ရလာဒ်ပိုင်းရော၊ ခြေစွမ်းပိုင်းမှာ မတည်ငြိမ်ခဲ့ပါဘူး။ ကွင်းလယ်မှာ သူက Piovt ကစားသမား (၂)ဦးထားကစားဖို့ အားသန်နေခ့ပြီးတော့ ကက်စ်မဲရိုးအစား လော်ရန်တေးကို ပိုအသုံးပြုနေခဲ့တာက ရီးရဲလ်ကို ပေးဂိုးတွေ ပိုများစေခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလာရီအနေနဲ့ ပင်တိုင်ကစားကွက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုဖို့ပဲ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကစားသမားတွေအပေါ် ကိုင်တွယ်မှုပါ။ သိသိသာသာ အားနည်းနေခဲ့ပြီးတော့ ကစားသမားနဲ့ နည်းပြတွေကြားမှာ နွေးထွေးမှု ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ အစ္စကို နဲ့ ဆိုလာရီ ပြသနာကအထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်ကစားသမားတချို့နဲ့လည်း လိပ်ခဲတည်းလည်း ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသာ ဆိုလာရီ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက စီဘယ်လော့စ်၊ ဗယ်လ်ဗာဒီ နဲ့ လော်ရန်တေးတို့ကို အထင်ကြီးနေပြီးတော့ ပွဲထွက်ခွင့် ပေးခဲ့ပြီး စီနီယာကစားသမားတွေကို ပညာပြချင်တဲ့ ပုံစံရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လူငယ်သွေးသစ်တွေကို မွေးထုတ်ချင်တာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ၀ါရင့်ကစားသမားတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ အလှည့်ကျစနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး မှန်ကန်တဲ့ဗျူဟာကို ချမှတ်ဖို့က အသင်းကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်လာပါစေလိမ့်မယ်။
ရီးရဲလျမကျဒရဈရဲ့ ခွစှေမျးကတော့ တဈနရှေှ့ေ၊ တဈနငှေ့ဖွေဈနပွေီး ပူလိုကျဖောငျးလိုကျနဲ့ နှဲသမားပါးစပျရယျလို့ကို ပွောစမှတျတှငျနပေါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ခွစှေမျးကောငျးသလောကျ နောကျပှဲကရြငျ ထငျမှတျမထားရလောကျအောငျ ခွစှေမျးက ကဆြငျးသှားနတောက ဒီရာသီမှာ မကွာခဏဆိုသလို ဖွဈနပေါပွီ။ ပွညျတှငျးလိဂျမှာလညျး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးရတော့မယျ့ အနအေထားနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေပွီး ကံဆိုးခဲ့ရငျ ဥရောပဘုရငျကွီးအတှကျ ဆုဖလားလကျမဲ့ရာသီကိုတောငျ ရငျဆိုငျသှားရနိုငျပါတယျ။ ဇီဒနျးထှကျတယျ၊ ရျောနယျဒို ထှကျတယျ၊ လော့ပျတယျဂီဝငျလာပွီး ပွနျထှကျသှားကာ ဆိုလာရီ ပွနျဝငျလာခဲ့တဲ့အထိကို ရီးရဲလျက မတညျမငွိမျဖွဈသှားခဲ့တာပါ။ ဒီအခွအေနတှေကေို ပွောငျးလဲပဈနိုငျဖို့အတှကျတော့ ရီးရဲလျလုပျစရာတှကေ အမြားကွီးပါ။
ပထမဆုံးကတော့ အသငျးမှာ အာဏာရှငျစနဈကို ကငျြ့သုံးနတေဲ့ ပီရကျဇျရဲ့ ဥက်ကဌရာထူးနရောကို အစားထိုးသှားဖို့ပါ။ ပီရကျဇျရဲ့ ခတျေက ကုနျသှားပါပွီ၊ ငှကွေေးအမြားအပွားသုံးပွီး ဂလကျတီကိုကွယျစငျစုစီမံကိနျးကို တညျဆောကျခဲ့တာကလညျး ဒိတျအောကျသှားပါပွီ။
နညျးပွတှကေို ခနျ့တယျ၊ ငှပေေးပွီး ထုတျတယျဆိုတဲ့ ပုံစံမှာ ပီရကျဇျက အာဏာရှငျဆနျဆနျ ပွုမူနခေဲ့တာ ကွာပါပွီ။ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို မေးခှနျးထုတျရမှာ ဖွဈပွီး မဟာပွိုငျဘကျ ဘာစီလိုနာ တညျငွိမျသလောကျ ရီးရဲလျမှာ သူ့ရဲ့ ခလောကျဆနျမှုတှကေ တျောတျောလေးကို အသငျးတှငျး လှုပျခတျနစေခေဲ့တာပါ။ အရညျအခငျြးရှိပွီး အပွောငျးအရှမှေ့ာ ဖြံကလြှနျးတယျလို့ ခြီးကြူးရမှာဖွဈပမေယျ့လညျး ပီရကျဇျက သူ့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို ရီးရဲလျမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ တညျဆောကျထားတာက အသငျးအတှကျ ရရှေညျမှာ ဆိုးကြိုးတှမြေားလာစခေဲ့တယျဆိုတာကို ဒီနှဈမှာ သကျသပွေနပေါပွီ။ ဒီအတှကျ ပီရကျဇျရဲ့ နရောကို ရီးရဲလျတို့ အစားထိုးရတော့မှာပါ။
နောကျတဈခကျြကတော့ ရျောနယျဒိုရဲ့နရောအတှကျပါ။ အသငျးအတှကျ ဂိုးပေါငျးမြားစှာ သှငျးယူပေးနိုငျတဲ့ ကစားသမားကို ရောငျးထုတျခဲ့ပွီးနောကျ ရီးရဲလျမှာ ရျောနယျဒိုရဲ့ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျကို မီတဲ့ကစားသမား တဈယောကျမှ ရှိမနတေော့ပါဘူး။ တဈရာသီကို အနညျးဆုံး
သှငျးဂိုး (၃၀)လောကျ သှငျးနိုငျတဲ့ ဥရောပထိပျတနျးလိဂျ (၅)ခုက တိုကျစဈမှူးတဈဦးလောကျကို ဝယျယူဖို့ ပရိသတျတှကေ မြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ ဖွဈမလာသေးပါဘူး။ မာရီယာနို နဲ့ မနျစီးတီး ဒီယကျဇျတို့လို လူငယျတှကေိုသာ ချေါယူအားဖွညျ့ထားပွီး အတှအေ့ကွုံရငျ့ တိုကျစဈမှူး တဈဦး လိုအပျနတေဲ့ ကှကျလပျကို အခုထိ သူတို့ မဖွညျ့ဆညျးနိုငျသေးတာက အားနညျးခကျြတဈခုပါ။ ဘနျဇီမာက ယုံစားလို့ရတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကို သိသိနဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောငျဆငျနတေဲ့ ရီးရဲလျအဖွဈက ပိုပိုပွီး ဆိုးလာဖို့သာ ရှိနပေါတယျ။
ဇီဒနျးလကျထကျမှာ ၄-၁-၂-၃ ကစားကှကျကို ပငျတိုငျအသုံးပွုခဲ့ပွီးတော့ ကကျဈမဲရိုးကို ကှငျးလယျခံစဈမှာ ထားကစားခဲ့ပါတယျ။ ဒီကစားကှကျကနပေဲ ဇီဒနျးအောငျမွငျခဲ့တာပါ။ လော့ပျတယျဂီလကျထကျမှာ ၄-၃-၃ ပုံစံကို ပွောငျးလဲလိုကျပွီးတော့ အသငျးကို Possession Game ကစားစခေဲ့ပါတယျ။ ဇီဒနျးလကျထကျမှာ မာကြောခဲ့တဲ့ ခံစဈလိုငျးကို သူက ဖကျြစီးပဈခဲ့လို့ ရီးရဲလျ ပွသနာတှေ ကွုံခဲ့ရပါတယျ။ ဆိုလာရီကလညျး ဒီအတိုငျးပါပဲ။ သူက ၄-၃-၃ နဲ့ ၄-၂-၃-၁ ကစားကှကျကို အားသနျသူပါ။ ဒီရာသီမှာ အသငျးကစားကှကျကို
မကွာခဏဆိုသလို ပွောငျးလဲပဈခဲ့ပွီး ရလာဒျပိုငျးရော၊ ခွစှေမျးပိုငျးမှာ မတညျငွိမျခဲ့ပါဘူး။ ကှငျးလယျမှာ သူက Piovt ကစားသမား (၂)ဦးထားကစားဖို့ အားသနျနခေ့ပွီးတော့ ကကျဈမဲရိုးအစား လျောရနျတေးကို ပိုအသုံးပွုနခေဲ့တာက ရီးရဲလျကို ပေးဂိုးတှေ ပိုမြားစခေဲ့ပါတယျ။ ဆိုလာရီအနနေဲ့ ပငျတိုငျကစားကှကျတဈခုကို ရှေးခယျြအသုံးပွုဖို့ပဲ ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
နောကျတဈခကျြက ကစားသမားတှအေပျေါ ကိုငျတှယျမှုပါ။ သိသိသာသာ အားနညျးနခေဲ့ပွီးတော့ ကစားသမားနဲ့ နညျးပွတှကွေားမှာ နှေးထှေးမှု ပြောကျဆုံးနပေါတယျ။ အစ်စကို နဲ့ ဆိုလာရီ ပွသနာကအထငျရှားဆုံး ဖွဈပွီးတော့ ကနျြကစားသမားတခြို့နဲ့လညျး လိပျခဲတညျးလညျး ဆကျဆံရေးမြိုးကိုသာ ဆိုလာရီ တညျဆောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူက စီဘယျလော့ဈ၊ ဗယျလျဗာဒီ နဲ့ လျောရနျတေးတို့ကို အထငျကွီးနပွေီးတော့ ပှဲထှကျခှငျ့ ပေးခဲ့ပွီး စီနီယာကစားသမားတှကေို ပညာပွခငျြတဲ့ ပုံစံရှိနခေဲ့ပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ လူငယျသှေးသဈတှကေို မှေးထုတျခငျြတာ ကောငျးတယျဆိုပမေယျ့လညျး ၀ါရငျ့ကစားသမားတှနေဲ့ တှဲဖကျပွီးတော့ အလှညျ့ကစြနဈကို ကငျြ့သုံးပွီး မှနျကနျတဲ့ဗြူဟာကို ခမြှတျဖို့က အသငျးကို ပိုပွီးတော့ ကောငျးမှနျလာပါစလေိမျ့မယျ။
Home Football La Liga ဘာတွေမှားနေခဲ့လဲ၊ ဘာတွေပြုပြင်ရတော့မှာလဲ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်?